Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်Published July 27, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ် (Sandra Bullock) ဆိုရင် မြန်မာပရိတ်သတ် တော်တော်များများ သိကြပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ 1990 ခုနှစ်မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ “Speed” ဇာတ်ကားမှာ မင်းသားချော “ကိနူးရိဗ် (keanu reeves) နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒီ ဇာတ်ကားဟာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပြီး တက်သစ်စ မင်းသမီး ဆန်ဒရာ ဘူးလော့ဂ်ကိုလည်း လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# တိုင် အတိတ် / တိုင် နိမိတ်Published August 18, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# အိပ်မက် . . (၂)Published August 12, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged burmese horoscope, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ဂမ္ဘီရ, မဟာဘုတ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ကျမ်းလျှောက်လျှင် မဆုံး၊ ကျမ်းပေါက်လျှင် တစ်လုံးPublished July 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	ကံမခိုင် သံတိုင်အိမ် ဆောက်သော်လည်း . .Published July 14, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	မြန်မာစကားပုံ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ “ကံမခိုင် သံတိုင်အိမ်ဆောက်သော်လည်း၊ ကံမှောက်လျှင် လဲ” တဲ့ ။ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ အဓိပ္ပါယ်က “ကံတရားက ခိုင်ခန့်မှု မရှိရင် သံတိုင်တွေနဲ့ အိမ်ဆောက်ပေမယ့် ကံမှောက်မှားသွားရင်တော့ လဲပြိုရတော့ တာပါဘဲ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
Posted in ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ် /နှစ်သစ် ဟောကိန်းများPublished April 26, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, နှစ်ကူး ဗေဒင်, နှစ်ဆန်း ဗေဒင်	ဒဏ္ဍာရီထဲက သင်္ကြန်Published April 17, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | Tagged သင်္ကြန်, အတာသင်္ကြန်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် | 1 Comment	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,468)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,956)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,537)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,308)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,386)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,542)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,572)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,934)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,279)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,263)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,086)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,048)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,814)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,754)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,298)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,112)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,831)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,477)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,184)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,138)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,824)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,680)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,541)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,479)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,255)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,230)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,892)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,670)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,473)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,012)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !